COVID-19: Macaamiisha iyo Istaatistikada Iibsiga #StayAtHome | Martech Zone
Arrimuhu uma muuqdaan kuwo aad ugufiican mustaqbalka dhaqaale ee qofkasta marka la fiiriyo aafada iyo amarrada quful soo socda ee ka imanaya dawladaha adduunka. Waxaan rumeysanahay inay tani noqonayso dhacdo taariikhi ah oo saameyn weyn ku yeelan doonta, adduunkeenna… kana imaaneysa kor u kaca musalafnimada iyo shaqo la’aanta, in kasta oo ay tahay soo saarista cuntada iyo saadka. Haddayna wax kale ahayn, aafadani waxay muujisay sida ay u liidato dhaqaalaheena adduunku.
Taasi waxay tiri, xaalad qasab ah oo tan oo kale ah ayaa macaamiisha iyo ganacsiyada ka dhigaysa inay la qabsadaan. Maaddaama ganacsiyada ay sameynayaan qaybtooda oo ay shaqaaluhu ka shaqeeyaan guriga, waxaan aragnaa in si ballaaran loo ansaxinayo isgaarsiinta fiidiyowga. Waxaa laga yaabaa inaan ku gaadhno heer raaxo leh hawshan halkaasoo safarka ganacsiga la yareyn karo mustaqbalka - hoos u dhigista kharashyada hawlgalka iyo sidoo kale caawinta deegaanka. Ma ahan war wanaagsan warshadaha safarka iyo diyaaradaha, laakiin waxaan hubaa inay la qabsan doonaan.
OwnerIQ, oo ay soo iibsatay Inmar ee Q4 2019, wuxuu siinayaa xoogaa aragti ah sida macaamiisha ay ula qabsanayaan noloshooda cusub ee joogitaanka guriga, ka adeegashada guryaha, iyo la jaanqaadka dabeecaddooda wax iibsashada ee alaabada si waafaqsan. OwnerIQ waxay falanqeeyeen xogta dukaameeysiga khadka tooska ah ee 'CoEx Platform' si ay u bixiyaan macluumaadka, oo ay si muuqaal ah ugu soo bandhigeen xogtooda, Sidee Macaamiisha u yihiin #Siyeynta Guriga.
Macaamiisha COVID-19 Isbedelada Habdhaqanka
Way iska cadahay shaxanka macluumaadka in macaamiisha ay lacago dheeraad ah ku bixinayaan dhowr waxyaalood:
Qalabka Xafiiska La Xiriira - inay hagaajiyaan raaxadooda iyo wax soo saarkooda iyagoo ka shaqeynaya xafiiskooda gurigooda.
Jawiga Guriga - maalgashiga alaabada guriga ka dhigeysa mid raaxo leh.
Daryeelka Shakhsi ahaaneed - maal-gashiga waxyaabaha u fududeynaya maskaxdooda culeyska faafida iyo go'doominta.
Daryeelka Guriga - maxaa yeelay waqti ayaan ku qaadaneynaa guriga mana bixi doonno, waxaan maalgashaneynaa mashaariic guryaheena iyo hareerahooda.